पृथ्वीनारायणको अंग्रेज नीति
बजेट जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख: दाहाल
बजेटः कहाँ बढ्यो, कहाँ घट्यो ?
ब्लग शनिबार, जेठ २६, २०७५
अंग्रेजसँग सलको नीति मार्फत नेपाली भूमि बढाउन पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना काविल वकिलहरू खटाएका थिए ।
हाम्रो मातृभूमि नेपालको पूर्व इतिहासमा चाख राख्नेहरूका मनमा सधैं खेलिरहने एउटा कुरा के छ भने, पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पहिले नेपाल कस्तो थियो ? उसबेला नेपाल टुक्रँदै गएको थियो । नेपाल नाम हराउला भने जस्तो भएको बेला सचेत देश हितैषी विद्वान्हरू चिन्तित थिए । महाकवि उदयानन्द अर्जेलले यो यसरी व्यक्त गरेका छन्–
नेपाल पाटन भादगाउ भनि ता सल हुन्छ आपस् महाँ ।
नेपाल मुद्दत भो र कान्तिपुर भो नेपाल बुझ्न्या तहाँ ।।
त्यसबेलाका भुरेटाकुरे राजाहरूले आफ्नो राज्यको नाम बेग्लाबेग्लै राखिसकेका थिए । एउटा काठमाडौं आफूलाई नेपाल भन्दै थियो, अब त्यो पनि कान्तिपुर भन्न लाग्यो र नेपाल त स्थगित भयो अर्थात् कसैले पनि नेपाल भन्न छाडे । अब नेपाल नामै हराउने भयो भन्ने चिन्ताले महाकविले यो उद्गार निकालेका थिए ।
आखिर त्रिपन्न वटा राज्यमध्येको एउटा सानो र गरीब गोरखाका राजा यस देशलाई बढाएर एकताबद्ध पार्न अघि सरे । दुर्भाग्य भनौं वा संयोग, गोरखाबाट पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चलाएकै बेला ब्रिटिशको इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतको बङ्गालमा राज्य स्थापना गरेर बेपारसँगै राजकाज चलाउन लाग्यो ।
पृथ्वीनारायणले पूर्वका सेन राज्य जितेर तराई प्रदेश पनि नेपालमा मिलाउँदा यो त सेन राजाका पालामै नवाफको शिकार खेल्ने भूमि हो भनेर ब्रिटिशले दाबी गर्दै बखेडा खडा गर्‍यो ।
त्यसरी मनोमालिन्य बढ्न थालेपछि पृथ्वीनारायणले आफ्ना काविल वकिल दीनानाथ उपाध्यायलाई लिखत प्रमाण के रहेछ हेरेर स्वीकार्नु परे स्वीकार्नु तर, जमीन चाहिं कदापि नछाड्नु भनेर कम्पनीका अधिकारीसँग वार्ता गर्न पठाए । सोही बमोजिम चातुर्यले कुरा गरेर शिकार खेल्न नदिने बरु हात्ती दिने सम्झाैता गरेर उनी फर्किए ।
पछि पश्चिमका बुटवल–स्युराज क्षेत्रमा ब्रिटिशसँग त्यस्तै बखेडा पर्दा पृथ्वीनारायणको जस्तो रणनीतिक कूटनीति खेलाउन नजान्ने शासकले सम्झाैता गर्न सकेनन् र बलवान वैरीसँग जुध्दा टिष्टादेखि सतलजसम्म पुगेको विशाल नेपाल मेची महाकालीमा खुम्चियो । अंग्रेजसँग बढेको कचिङ्गललाई पृथ्वीनारायण शाहले कसरी साम्य पारेका थिए भनी इतिहासका विद्यार्थीलाई अवगत होस् भन्नाका लागि मुन्सीखानाको पोका नं. १–३९ पत्रको सार यहाँ दिएको छु ।
“वि.सं. १८२७ मा दीनानाथ उपाध्याय पृथ्वीनारायणका आज्ञाले दरभङ्गा गई अंग्रेजसँग मकवानी राजाले दिए सह्रह १४ हातको हात्ती प्रति वर्ष बुझाउने शर्त गरी तराईको जगाबाट अंग्रेजको हक छुटाए । उनी अंग्रेजको उठ्न बाँकी रुपैयाँको कागज गरी फर्किएका थिए । ३ वर्ष पछि १८३० मा रकम चुक्ता गरी तमसुक च्यातियो ।
माझिकरात, लिम्बुवान नजिती पश्चिमका चौबीसीसँग लडाईं गर्दा पृष्ठ शुद्धी हुँदैन भनी पृथ्वीनारायणले विश्वेश्वर अज्र्याल (जोशी) लाई चौदण्डी पठाए । २ वर्ष उता बसी उनले उहाँका मानिस हात लिई तजविज सबै मिलाएकाले पूर्वको मुलुक चाँडै हात लाग्ने पाठ भयो । अभिमानसिंह बस्नेतले चौदण्डी जिते । राजा कर्ण सेन भागी पारितर्फ विजयपुर गए ।
भदौमा विजयपुर पनि दख्खल भयो । त्यसपछि कर्ण सेन रामपुरमा रहेका मिस्टर फिकक साहेबको शरण परे । उनले विजयपुरमा अंगे्रज कम्पनीलाई कोठी खोल्न दिन्छु, दश आना कम्पनीलाई दिई ६ आना खान पाए म खुशी छु, गोरखाको दखल छुटाई पाऊँ भनेपछि फिककले कलकत्ता बडा साहेबछेउ खबर पठाए ।
उताबाट जवाफ नआइपुग्दै कर्ण सेन खसे । उनका छोरा बालकै थिए । सं. १८३४ मा देवान दीनानाथ उपाध्याय वारन हेंस्टिग्ससँग कुरा मिलाउन कलकत्ता गएको बेला कर्ण सेनका छोरा पनि शीतलाको बेथाले परलोक भए ।
नागाहरू हरिद्वारबाट कम्पनी सरकारका अधीनस्त क्षेत्र चम्पारन, तिह्रौत, पुर्णिया, दिनाजपुरसम्म पसी लुटपाट गर्थे । नेपालको तरीमा समेत पसी फर्केर जान्थे । नेपालसँग मिली नागा हराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने काउन्सिलमा ठहर हुँदा वारन हेंस्टिग्सले नेपालसँग दोस्ती गर्ने इच्छा लिएका थिए । उनले दीनानाथ मार्फत चिठी लेखी पठाए । त्यसपछि यताबाट फौज पठाएर नागा रोकियो । त्यसै वेलादेखि दोस्ती बढ्दै गयो ।
पछि मिर्जा अबदुल्लाह वेगले रौतहट जागीर खाइदियो भनी दीनानाथ हेंस्टिग्ससँग कुरा गर्न गए । त्यही बेला वनारसमा चेतसिंहले विद्रोह उठाए । चेतसिंहको निद्रोह दबाई विजयगढ अम्बल गर्न पहाडी फौजको मद्दत माग्नुपर्छ भन्ने सल्लाहले दीनानाथ मार्फत खबर नेपाल पठाइयो ।
नेपाल दरबारले मद्दत दिन मञ्जुर गरेर धौकलसिंह बस्नेत र पारथ भण्डारीका मातहतमा मकवानपुरको बाटो फौज पठायो । त्यत्तिकैमा विजयगढ दख्खल भएको खबर आउँदा नेपाली फौज फिर्ता भयो ।
केही मानिसले छपराका गिरि साहेब मार्फत नेपाली फौज चेतसिंहलाई मद्दत दिन आएको थियो, चेतसिंह खारेज भएपछि फर्किगयो भन्ने चुक्ली बडा साहेबलाई लाएका थिए । दीनानाथसँग भेट हुँदा बडा साहेबको चर्काचर्की पनि परेछ । मिर्जा अबदुल्लाह वेगले रौतहट खाएको उजुर दीनानाथले गरेका थिए त्यसपछि रौतहट नेपालको सरहद भयो ।”
विहीबार, जेठ १५, २०७७ भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण
विहीबार, जेठ १५, २०७७ कर केमा बढ्यो के मा घट्यो ?